कहाँ छ गरिवलाई न्याय ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / कहाँ छ गरिवलाई न्याय ?
कहाँ छ गरिवलाई न्याय ?
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार, स्लाइड April 18, 2019	0 69 Views
१६ हजारले १६ वर्षदेखि अदालत धाउँदै
नेपालगञ्ज। बाके खजुराका झबरा खानले नेपालगञ्जमा रहेको जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत (उच्च) धाउन थालेको १६ वर्ष भयो। तमसुक गरेर ऋण लिएको १६ हजार रुपैया“ले झबरालाई १६ वर्षदेखि अदालतमा दौडाइरहेको छ।
२०५७ पुस २७ गते झबराले छिमेकी जलालुद्दिन भन्ने जमाल खा“स“ग १६ हजार रुपैया सापट लिएका थिए। तमसुक गरेर लिएको १६ हजार ऋणवापत जमालले झबराको दश कट्ठा जग्गा बन्धकी पनि खाए। जमालले ‘पावर’ देखाएर १६ हजारमा झबराको चार कठ्ठा जग्गा खान खोजे। झबराले चलनचल्तीको मूल्यमा जग्गा खान सहमति जनाए। जमालले १६ हजारमै चार कठ्ठा खान जोडबल गरे। कुरा मिलेन। पैसा लिएको दुई वर्षपछि एक दिन अदालतबाट कर्मचारीहरु झबराको घरजग्गाको मुचुल्का गर्न आइपुगे। झबरा त छा“गाबाट खसेजस्तै भए। भएछ के भने जमालले ‘पावर’को प्रयोग गरेर झबराको घरजग्गा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएका रहेछन्। त्यो कुरा थाहा पाएपछि झबरा दौडेर अदालत पुगे। प्रतिउत्तर लगाएर घरजग्गा लिलामी हुनबाट जोगाए। त्यसपछि झबराले चार कट्ठा जग्गा बेचे। जग्गा बेचेपछि झबराका छोरा १६ हजारको ठाउ“मा ३२ हजार दिन जमालको घरमा गए। जमालले ‘पैसा लिन्न, तेरो घर जग्गा नै खान्छु’ भनेर फिर्ता पठाए।
‘१६ हजारको ३२ हजार लिन मान्दैनन्। चलनचल्तीको ब्याज नै लिऊ भन्दा पनि जमाल मान्दैनन्। उसको नजर त ‘कानुन किनेर’ मेरो घर जग्गा हडप्ने नै रहेको छ’– झबराले
भने– ‘म पनि १६ वर्षदेखि त्यसको प्रतिकार गर्दै पछिपछि दौडिरहेको छु।’ जमालले नेपालगञ्जमा चर्चितमध्येकै कानुन व्यवसायी राखेका छन्। उनले झबराको घरपरिवार र छिमेकीलाई ‘न्यायाधीशसम्म मिलाएर’ झबराको घरजग्गा हडपेरै छोड्ने धम्की दिने गरेका छन्। सापट लिएको पैसा ब्याजसहित दिंदा नलिएका जमालको आ“खा खजुरामा रहेको झबराको करोडौको घरजग्गामा परेको छ। झबराको घरजग्गा लिलामी आदेश हु“दाको घटना पनि ‘नेपालको कानुन, दैवले जानून्’ भन्ने खालको छ। अदालतका कर्मचारी धनसिंह गिरी मुचुल्का गर्न गएका थिए। उनले झबराको घर रहेको जग्गाको मुचुल्का गरे। तर, मुचुल्कामा घर देखाएनन्। अर्को कुरा बैंकबाट ऋण लिएकाले त्यो घरजग्गा रोक्का थियो। भूमाफिया र कर्मचारीले झबराको उपस्थितिबिना नै फुकुवा गरेर लिलामी प्रक्रियामा पु¥याए।
दुईवटा भन्दा पनि खतरनाक खेल त अर्को भयो। त्यो के भने नि, धनसिंहले एउटा व्यक्तिलाई साक्षीमा नाम राखेर अर्को व्यक्तिको टाप लगाएर मुचुल्का बनाए। गिरीको टोलीले मन्ना अहिर, जब्बार खा“, समिर खा“ र चन्टु मनिहारलाई साक्षीमा राखेर टाप लगाएका छन्। यी सबै व्यक्तिको नाम मिले पनि टाप भने मिलेको छैन। नाम एउटाको, टाप अर्काको लगाउने काम भएको छ। टाप लगाएकामध्येका मन्ना अहिर र जब्बार खा“ आफ्नो टाप नभएको भन्दै अदालतमा उपस्थित भइदिएपछि धनसिंह गिरीलाई अप्ठेरो परेको थियो। यी दुईजनाको टाप हो कि होइन भनेर काठमाडौंमा पठाइयो। उताबाट यिनीहरुको टाप नभएको पुष्टि भएर आयो। प्रयोगशालाले मन्नाको मिलेन नै भनेर यकिन गरेर पठायो। जब्बारको यकिन भएन भन्ने देखायो। यसका वावजुद पनि धनसिंह गिरीलाई कारवाही भएको छैन। न त अघिल्ला दुई किर्तेमा नै कुनै कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको छ।
एउटा साधारण व्यक्तिलाई शक्तिशालीले कसरी अदालतका कर्मचारीस“ग मिलेर दुःख दिंदारहेछन् भनेर खोज्नलाई झबराको मुद्दा हेरे पुग्छ। पैसा दिंदा लिदैनन्। एउटा मुद्दा हार्ने बित्तिकै जमालले अर्को मुद्दा हाल्छन्। यसो गर्दा गर्दै १६ वर्ष बितिसकेको छ। यो अवधिमा तीन पटक पुनरावेदन (उच्च) र ४÷५ पटक जिल्लामा मुद्दा लागिसकेको छ। झबरा अहिले पनि पा“च वटा फाइल लिएर अदालत धाइरहेका छन्। पछिल्लो पटक जमालले ‘लिखत बदर’मा मुद्दा हालेका छन् भने झबराले किर्ते जालसाक्षीमा मुद्दा लगाएका छन्। १६ हजारको मुद्दा लड्दा लड्दै झबराले १० कट्ठा जग्गा बेचिसकेका छन्। अब त उनको त्यही खजुरामा १४ धुरमा रहेको घरमात्रै बचेको छ। झबरा भन्छन्– ‘जमाल कानुन खरीद गर्दै हिडेका छन्। म पछि–पछि दौडिरहेको छु। अब त बरु घरजग्गा गए जान्छ। तर, किर्ते जालसाजीमा कारवाही नभएसम्म म पछि हट्दिन। सर्वोच्च जानु परे पनि जान्छु।’
‘ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय हो’ भन्ने गरिन्छ। झबराको घटनामा कानुन बुझेकाले खेलिरहेका छन्। झबरा प्रश्न गर्छन्– ‘मलाई कहिले न्याय मिल्छ ? के मैले १६ हजारमै करोडांैको घरजग्गा दिनुपर्ने हो ?’
Previous: फेरिदै छिल्लीकोट
Next: प्रदेश ५ का महिला खेलाडीले पाएनन् ट्रयाकसुट र जुत्ता